Reason Why You Can’t Sleep! – My Doctor
Reason Why You Can’t Sleep!
ညအိပ်မပျော်ခြင်း ဝေဒနာကို လူတိုင်းအနည်းနှင့် အများ ခံစားဖူးကြပေလိမ့်မည်။ အများအားဖြင့် လူသားများသည် နေ့ဘက်တက်ကြွလှုပ်ရှားကြပြီး ညအချိန်တွင် အိပ်စက်အနားယူပေးရပေသည်။ သို့မှသာ နိစ္စဓူဝ ကိစ္စအဖြာဖြာကို ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပေမည်။ ညဘက်တွင် ကောင်းစွာအိပ်မပျော်ပါက နွမ်းလျ အိပ်ငိုက်နေကာ အတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပေသည်။
ထိုအခါ ညအိပ်မပျော်ခြင်းသည် ပြဿနာအရင်းခံလော၊ ရောဂါအခံတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်ခြင်းလော၊ သိရန်လိုအပ်လာပေသည်။ အချို့သောသူများမှာ ညဘက်တွင် အလုပ်လုပ်ရလေ့ရှိသောကြောင့် ညအိပ်မပျော်ဘဲ နေ့ဘက်တွင် ပိုအိပ်လေ့ရှိသည်မှာ ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် အိပ်မပျော်ခြင်း ဖြစ်စေသော အကြောင်းများပါ သိရန်လိုအပ်လာပါသည်။
ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံမတူခြင်း (ညဘက်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ဆူညံနေသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိခြင်း၊ အေးလွန်း ပူလွန်းခြင်းစသည်)၊
အိပ်ဆေးများ သုံးစွဲလေ့ရှိခြင်းကြောင့် အိပ်ဆေးမပါသောအခါ အိပ်မပျော်ခြင်း
စိတ်ပူပန်နေခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း စသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ
အရက်နှင့် မူးယစ်စေသောဆေးဝါးများ ဖြတ်ခြင်း
ရောဂါအခံရှိခြင်း (နှလုံးမကောင်းခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိခြင်း၊ ညအိပ်စဉ် အသက်ရူရပ်ခြင်း၊ လေဖြတ်ထားခြင်း နှင့် အခြားသောဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောရောဂါများ၊ နာကျင်နေခြင်း စသည်)
ညဘက်တွင် အိပ်ပျော်သွားရန် ခက်ခဲခြင်း
ထမည်ဟု သတ်မှတ်ထားချိန်ထက် စောနိုးနေခြင်း
ညအိပ်ပြီးသော်လည်း ပင်ပန်းနေသည်ဟု ခံစားရခြင်း
နေ့လည်ဘက်တွင် နွမ်းနယ် အိပ်ငိုက်ခြင်း
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဝေဒနာများ ခံစားရခြင်း
အိပ်စက်ခြင်း အတွက် ပူပန်နေရခြင်း
ဤသို့ အိပ်မပျော်ခြင်းကို ခံစားရပါက ကောင်းမွန်သော အိပ်စက်မှုပြန်လည်ရရှိရန်
ညအခါ ကဖိန်းဓာတ်ပါသော အစားအစာများ (ကော်ဖီ) စားသောက်ခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ဗိုက်ဆာနေလျက် အိပ်ရာဝင်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
တရားထိုင်ခြင်း၊ အကြောလျော့ခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးပါ။
တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးရင်ဖွင့် ဆွေးနွေးခြင်းများပြုလုပ်ပေးပါက စိတ်ဖိစီးမှုကို ကျစေကာ အိပ်စက်ခြင်းကို အထောက်အကူပြု စေတတ်ပါသည်။
အိပ်ရာထဲတွင် တီဗွီကြည့်ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၊ စားသောက်ခြင်း၊ စိတ်ပူပန်နေခြင်းကို မပြုလုပ်သင့်ပါ။
နေ့လည်ဘက် ကြာရှည်စွာအိပ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
လိုအပ်ပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်၍ အိပ်ဆေး သုံးစွဲခြင်း၊ ရောဂါရှိမရှိ ရှာဖွေကုသခြင်းတို့ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
tin su	2018-01-12T10:32:03+00:00	October 12th, 2017|Categories: ကျန်းမာရေး( က-အ ), ကျန်းမာရေး( အ ), အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ, နေထိုင်မှုပုံစံ|0 Comments